Hogaamiyaasha DDLJ SRK Iyo Kajol Oo Airport-ga Mumbai Lagu Arkay (+Sawiro) – Filimside.net
Hogaamiyaasha DDLJ SRK Iyo Kajol Oo Airport-ga Mumbai Lagu Arkay (+Sawiro)
Waxaa sawiro laga soo qabtay xidigaha filmka Dilwale Dulhania Le Jaayenge ee Shah Rukh Khan iyo Kajol iyagoo Airport-ga Mumbai kusugnaayen xiliyo kala duwan sawir qaadayashana sawiro xiiso leh kasoo qabteen.
SRK waxuu usocday subaxii hore xiliga hindiya Dubai halkaas oo uu kusoo duubayeo xayeysiimo kala duwan jilaagan ayaa si dhaqsi ah India ugu soo noqday isagoo markii horeba Dubai joogay balse hadana subaxii hore xiliga Hindiya ayuu Dubai u safray maadama duubis xayeysiimo laga rabo.
Sanadkii hore waqtigaan oo kale ayuu Dubai shirkado badan xayeysimo ugu sameeyay sidaas si lamid ahna sanadkaan halkaas ayuu kusoo duubi doono xayeysiinta badeeco kala duwan balse markaan waxaa la jiri doonto atirishada Hollywoodka Paris Hilton oo xayeysiimo caalami ah la duubi doonto xidigaan.
Dhanka kale Kajol oo deg degsan ayaa magaalka Mumbai soo gashay xidigtaan waxay katimid Kolkata halkaas oo ay ku xayeysiineysa mashruuceda Helicopter Eela ee maalinta barita ah tiyaatarada la saari doono.
Kajol ayaa todobaadyadan ku mashquulsaned xayeysiin usameenta mashruuceeda Eela ee jimcaha la daawan doono waana film uu seygeeda Ajay Devgan qarash gareenayo waxa muuqata howsheeda xayeysiinta inee soo idlaatay.
Halkaan hoose ka daawo Shah Rukh Khan iyo Kajol sawirada laga soo qabtay iyagoo Airport-ga Mumbai kudhex sugnaa xiliyo kala duwan mid walbana dantiisa gaarka ah usocday…